Mavara matsva eAirTag Leather Loop uye AirTag Kiyi Mhete, asi kwete kuApple | Ndinobva mac
Mavara matsva eAirTag Leather Loop uye AirTag Kiyi Mhete, asi kwete kuApple
Imwe yemisika mikuru iyo Apple yainayo haisi yemidziyo yacho, asi yezvishandiso iyo yainogona kuitengesera. Pakatangwa maAirTag, zvishongedzo zvakabva zvavaperekedza. Tine zvese kubva pamakiyi ezvindori kusvika kumategi emikwende yakagadzirwa naHermés. Iri reef harimire uye ndosaka zvitsva zvabuda nemavara akasiyana. Asi zvinoitika kuti mamwe eayo mavara Apple haizvitengesi panguva ino, kana zvisiri ivo vechitatu vatengesi.
Pamusoro pekuunza iyo nyowani MagSafe bhatiri pack pasvondo rapfuura, Apple yakaunza izvo zvitsva zvishongedzo AirTag Leather Loop uye AirTag Kiyi Mhete mumavara akagadziridzwa, Asi zvinoita sekunge kuchave nemumvuri wepamutemo unouya, kana aripo echitatu-bato revatengesi zvinyorwa zviri zvechokwadi. Semuenzaniso, Amazon parizvino ine yakawedzera AirTag Loop sarudzo dzemhando muCapri Blue uye Pink Citrus, uye ese ari maviri AirTag Leather Loop uye AirTag Leather Key Ring aripo muMeyer Lemon.
Iwo mavara anowoneka mune vamwe vechitatu-bato online vatengesi zvakare, asi hapana imwe yadzo inowoneka muchitoro cheApple chepamhepo. Vese vatengesi vanonyora mamwe mavara sekunge aripo kubva muna Nyamavhuvhu kana Gunyana, saka zvinogara zvichikwanisika kuti Apple ivawedzere kuchitoro chayo chepamhepo panguva iyoyo futi.
Zvinotaridza kuti zvinyorwa, zvakaonekwa nemushandisi we twitter epictech, zvichaendeswa kune vatengi kupera kwaNyamavhuvhu. Hazvina kujeka kuti nei vakanyorwa izvozvi, uye zvinoita seAmazon yakatora zvinhu zvacho pakutanga. Pakazara pane zvinhu zvina. Ivo vese vakanyorwa sekutengeswa neAmazon pane wechitatu-bato mutengesi.
Apple ichironga kumwe kuburitswa nemavara matsva eAirttag zvishongedzo…? Mazuva ese ekuendesa ari kupera kwaAugust. pic.twitter.com/ZjBYcZ5KJa
Kubva pane zvatakakwanisa kucherechedza, kwechinguvana vanosangana chete mumusika weAmerica. Tichafanirwa kuve nemoyo murefu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mavara matsva eAirTag Leather Loop uye AirTag Kiyi Mhete, asi kwete kuApple
Tim Cook anopemberera makore makumi mana ekuvapo kweApple muSingapore
Wana mwedzi mitanhatu yemahara paApple TV + kana uine PlayStation 6